Hogaamiyeyaasha Kenya oo loogu baaqay in ay cashir ka bartaan doorashada Mareykanka – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyeyaasha Kenya oo loogu baaqay in ay cashir ka bartaan doorashada Mareykanka
Star FM November 10, 2016
Danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Kenya Rober Godec ayaa ku boorriyay siyaasiyiinta Kenya in ay cashar ama 2 cashar ka qaataan hannaanka ay u dhacdo doorashada waddankiisa iyo sida ay hogaamiyeyaasha u aqbalaan natiijo kasta.
Mr Godec ayaa tusaale usoo qaatay sida ay shalay xisbiga Dimuqraadiga u qaateen guul darradii aadka u kharaareyd ee lama filaanka ahayn ee mar qura kasoo baxday natiijada doorashada.
Safiirka Mareykanka ayaa ka codsaday shacabka iyo hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee Kenya in ay tallaabadasi oo kale qaadaan marka la gaaro waqtoga doorashada guud ee Kenya oo ku beegan bisha 8-aad ee sanadka soo socda.
Hadalka Godec ayaa u muuqda mid uu uga walaacsanyahay sida ay siyaasiyiinta Kenya ee iska soo hor jeeda u wajihi doonaan Natiijada doorashada 2017-ka.
Sanadkii 2007-di ayaa Kenya lagu xasuustaa in uu qalalaase ka dhacay markii lagu murmay natiijadii doorashada, iyadoo xiligaas ay ku dhinteen in ka badan 1000 qof, halka dad kor u dhaafaya Nus Malyan qofna ay ku bara kaceen.
← Bulshada ku dhaqan Koonfurta Wajeer oo ka cabanaya maamul xumo
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo u goodiyay siyaasiyiinta shacabka kiciya →
Dowladda oo beenisay in shacabka laga baarayo hidda-sidaha si loo diiwaangeliyo February 19, 2019
Madaxweynaha Turkiga oo sheegay in xulufada NATO ay hub ka iibiyaan argagixisada February 19, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay dhigiisa Bururndi. February 19, 2019
Shacab ka soo barakacay deegaanka Tiyeeglow oo daruufo nololeed soo wajahday. February 19, 2019
Taliyaha ciidamada India oo eedeyay sirdoonka Pakistan February 19, 2019
16 ka mid ah gobolada Maraykanka oo dacwad ka gudbiyay madaxweyne Trump February 19, 2019
Dowladda oo beenisay in shacabka laga baarayo hidda-sidaha si loo diiwaangeliyo
Madaxweynaha Turkiga oo sheegay in xulufada NATO ay hub ka iibiyaan argagixisada
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay dhigiisa Bururndi.
Shacab ka soo barakacay deegaanka Tiyeeglow oo daruufo nololeed soo wajahday.
Taliyaha ciidamada India oo eedeyay sirdoonka Pakistan
16 ka mid ah gobolada Maraykanka oo dacwad ka gudbiyay madaxweyne Trump